Qormo kooban Hadii uu Jawaari guuleysto ama laga adkaado Maxaa dhacaaya. – HORNAFRIC MEDIA
Mooshinkaan ayaa lagu abaabulay 24 saac gudahood markii ay xukuumadu ogaatay in la qoraayo mooshin ka dhan ah Ra’iisul wasaare Kheyre.
Hada xaalku waa sidee ?
20 cisho ku dhowaad waxaa hakad ku jira howlihii xukuumada iyo midii golaha shacabka hotelada magaaladu waxey noqdeen kuwo aad mashquul u ah lacag badan ayaa soo gashay magaalada oo ka timid labadda daraf ee is haya halka Al Shabaab ay xoojisay qaraxyada iyo dilalka gaadmada ah tan iyo markii uu dilaacay is qab qabsiga madaxda sare.
Xildhibaanada taageersan Jawaari waxey sugayaan in bari oo ah 28 bisha March lagu kala baxo arrinta Jawaari Aqalka Sare ayaa isna ku raacay in 28ka howshu dhinac u dhacdo laakiin uma muuqato iney bari wax dhamaan karaan.
Waxaa suurta gal ah iney bari hadlaan kooxda Jawaari waxaa kaloo la falin karaa iney sameeyaan wax qalalaasaha sii badiya.
Jawaari wuxuu heystaa xildhibaano dhowr nuuc ah qeyb waa kooxdii Qabyo ee Xasan Shiikh qaar waa xisbiga Daljir oo la sheego iney 13 xubnood ku lee yihiin Aqalka hoose koox waa xildhibaano la baxay Himilo oo u badan kuwo ka carooday balamo xukuumadu uga baxday qaarka kalana waa xubno kasoo jeeda Baay iyo Bakool oo isaga taageersan.
Xubnaha Jawaari taageersan waxey badi kasoo jeedaan Gal-Mudug iyo Hirshabeele Jawaari waxaa la sheegaa inuusan heysan dhaqaalo badan oo uu ku dagaalamo balse ilo xogogaal ah waxey sheegayaan inuu markaan jeebka gacanta galiyay si uu u bad baado sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inuu yahay nin saaxiibo badan leh.
Hadii uu Jawaari guuleysto ?
Sida muuqata khilaafkan waxaa ku bixi kara mid ka mid ah sadexda nin ee dalka ugu sareysa.
Jawaari wuxuu u baahan yahay mar walba wax ka yar 93 xildhibaan waxaana loo eegi doona hadba inta mudane ee fadhiga soo xaadirta.
Hadii uu Jawaari bad baado waxa ugu horeya ee dhici kara waa inuu madaxweyne Farmaajo isku furto Ra’iisul wasaarihii ama la dabaqo mooshinka xukuumada oo la aado lacag bixin hor leh iyo dagaal cusub oo aan la sahmin karin natiijadiisa Sidoo kale lama hubo iney xildhibaanadu ka wareejin doonaan madaxweynaha qudhiisa.
Jawaari waxaa kaloo u taala sidii uu ka yeeli lahaa xildhibaanada isaga diidan oo la aaminsan yahay iney boqol ka badan yihiin waxa dhici kara waa fowdo iyo kulamada oo la arbusho hadii uusan Jawaari helin jid kale oo uu kusoo celiyo xiriirkii wanaagsanaa ee kala dhaxeeyay xildhibanadas.
Hadii Jawaari laga adkaado ?
Hadii uu Jawaari baxo sida ay wax noqon doonaan waxey ku xiran tahay gudoomiyaha imaan doona iyo kooxda wadata Dadka aadka ula socda arrintaan waxey aaminsan yihiin in Baarlamanku uu kala qeybsanaan xoogan wajihi doono.
Xukuumadu waxey aaminsan tahay in hadii ay Jawaari iska wareejiso ay xal fiican heli doonto laakiin taas lama hubo waxeyna ku xirnaan doontaa nuuca qofka imaan doona.
Mucaaradku waxey bilaabi doonaan iney is abaabulaan oo ay qarash badan huraan si aaney Villa Somalia u wada maamulin sadexda kursi ee dalka ugu sareysa waxey hadba guushoodu ku xirnaan doonta sida ay u shaqeeyaan iyo inta uu jeebkoodu la eg yahay.
Si kastaba Baarlamaanka 10aad wuxuu u muuqda mid jidkii saxda ahaa ka lumay xukuumadu eedbey ku leedahay inuu suurad xumaado Baarlamanku.
W/Q : Cabdulaahi Cismaan Faarax
Mudaharaad Lagu Taageerayo George Floyd oo ka Dhacay Caalamka oo Dhan..Daawo June 4, 2020
Afartii Boolis ee Ka Dambeeyay Dilkii George Floyd oo Maxkamad Loo Diray..Daawo June 4, 2020
Maamulka Trump oo Ka Mamnuucay in Diyaaradaha Shiinihu ka Dagaan Dalka Maraykanka.. June 4, 2020
Adan Barre Ducaalle oo Ka Badbaaday Mooshin Xilka looga Tuuri Lahaa..Daawo June 4, 2020
Ugaaska Beesha Mudulood oo Ka Horyimid Qorshaha Kooxda N&N..Daawo June 4, 2020
Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland oo La Wareegay Xilkii loo Magacaabay..Daawo May 4, 2020
Deeqda Turkiga ee Caafimaadka Ma Bakaarahaa Lagu Gadi Mise Waa La Qaybin? May 4, 2020
Turkiga oo Cudurka Caabuqa ka Daweeyay Dadkii ugu Badnaa.. May 4, 2020
Maraykanka oo Sheegay in China Halista Cudurka ka Qariyay Caalamka.. May 4, 2020
Madaxwaynaha Tanzania oo Sheegay in Deeq Cudur Qabta Dalkiisa La Siiyay. May 4, 2020
Madaxwaynaha Puntland oo Kormeeray Xarumaha Gurmadka Qardho. Daawo May 4, 2020
France President pretending to be a Friend to Africans but creating hidden agenda..Watch April 16, 2020
Lacagtu 3-5 Bari Bay kuugu Jirtaa Bangigaaga Waxaa Yiri Ra’iisulwasaaraha Canada. Daawo April 6, 2020
Beel Lacag ku Bixisa in ay Dawlad Madaxbanaan Tahay…Daawo April 6, 2020